Nooca xiga ee OnePlus wuxuu ku dari doonaa Snapdragon 835 | War gadget
Dhamaadkii sanadkii hore shirkadda South Korea Samsung ayaa amar weyn ku siisay processor-ka Qualcomm Snapdragon 835, iyo wax yar ka dib markii dhowr shirkadood ay ku dhawaaqeen qalabkooda processor-kii hore sababtoo ah yaraanta qaabkii ugu dambeeyay ee processor Qualcomm. Kiiska LG ee bilaabay G6 ama soo bandhigida Sony Xperia XZ Premium ee MWC ee magaalada Barcelona, ​​waxaa cadaatay in shirkada Kuuriyada Koofureed aysan been sheegayn markii ay sheegtay inay la wareegeen ku dhowaad dhamaan processor-rada Qualcomm, waana sababtaas LG G6 wuxuu leeyahay processor-kii hore ee hore Sony-na lama sii deyn doono illaa bartamaha sanadka.
Marka laga hadlayo qaabka cusub ee OnePlus, waxaa loo soo dusiyey inuu kor u qaadi karo processor-ka oo ah, marka lagu daro shaashadda 5,5-inji, noocaan cusub ee aaladda cajiibka ah ayaa sidoo kale ku dari doona kii ugu dambeeyay ee Qualcomm, taas oo ah, dhawr bilood gudahood. Sida iska cad maanta ma haystaan ​​fursad ay ugu adeegsadaan processor-kaan sida astaamaha kale ee suuqa aysan u isticmaalin, laakiin ciyaarta si fiican ayey u socon kartaa haddii ay helaan diyaar u noqo bilaha Juun iyo Julaay taas oo ah markii noocyada cusub ee OnePlus badanaa la soo bandhigo.
Marka waxaan horeyba u dhihi karnaa cabsi la'aan inaan qaladno in qaabka cusub ee OnePlus uu noqon doono midka ugu fiican xaga awooda iyo qeexida, taas oo hadii aan ku darno naqshada quruxda badan ee OnePlus sida caadiga ah ay leedahay iyo qiimaha loo habeeyay iyadoo la tixgelinayo qeexitaanada, waxaan waxay wajahayaan qalab runtii cajiib ah. Waa inaan in yar sugno oo aan aragnaa waxa run ka ah waxaas oo dhan oo ah processor-ka cusub ee Snapdragon 835 ee ku jira OnePlus, laakiin waxay u dhowdahay hubaal inay ku dambayn doonto ku dariddeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Nooca xiga ee OnePlus ayaa ku dari doona Snapdragon 835
Kuwani waa hawlwadeennada Isbaanishka ee leh meerashada bilaashka ah